မေစု | အမှတ်တမဲ့.....နှင်း....
You are currently browsing the tag archive for the ‘မေစု’ tag.
November 22, 2009 in မင်းစိုးရာ | Tags: မေစု | 1 comment
ပန်းပွင့်၊ သစ်ရွက်၊ ချိုအီငှက်သံ
တစ်ယောက်ရယ်သံ တစ်ယောက်မကြားရတော့ဘူး။ ။
သရဖူ မဂ္ဂဇင်း ၊ ဇွန် ၊၂၀၀၆
November 22, 2009 in မင်းစိုးရာ | Tags: မေစု | Leaveacomment
ခြေသံလုံလုံ ဖောက်ဖျက်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ
ဒီမှာ မျက်ရည်ရဲ့ ရနံ့သာ အသက်ရှူဝခဲ့ပေါ့
ဟော့ဒီ မနာကျည်းရက်တဲ့ ရိုးမြေကျဝေဒနာ
အချစ်ဟာ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးသာဖြစ်ခဲ့တယ် ။
အကြည့်ဝေ့လည်လွန်းသူလေးရယ် . . .
နှလုံးသားကို စိုက်ချလိုက်တဲ့ အလွဲသုံးစားမှုကပြင်းရှလွန်းခဲ့
သေနတ်ချင်း ယှဉ်ပစ်ခဲ့ပေါ့ ။ ။
စရဏ မဂ္ဂဇင်း ၊ ၂၀၀၇
အခု . . .မင်းက
ကိုယ့်ညီမလေး ငယ် . . .
ထိုးကျနေတဲ့ ငါ့အရိပ်ကို မင်းစိတ်နဲ့ဖဲ့ယူခဲ့ရ
သစ္စာလို ငါစောင့်သိရိုသေတတ်ခဲ့ပြီ ။ ။
“မင်း . . .
မင်းဘ၀လေးထဲ အရောက်လာမယ့် ငါ့ခြေလှမ်းလည်း
ခုချိန် ညီမလေးရဲ့  အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်
ငါ့မေတ္တာ နင်ရစေချင်တယ်။
ကိုယ့်ညီမလေး မေစု ရေ . . .
စကြဝဠာ အပြင်ဘက်ဆိုရင်လည်း ထွက်စောင့်ရုံပေါ့
ရှက်စိတ်ကလေး နှုတ်ခမ်းမှာ ကိုက်ထားရုံ
ငါ့ မှာအငေးအမောနဲ့ သွယ်တန်းရတယ်။
ငါတို့တွေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဝေးရမယ် . . .
သြော် . . .ဘယ်လိုဘယ်ပုံဝေးကြမယ် . . .။ ။
သရဖူ မဂ္ဂဇင်း ၊၂၀၀၅
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခက်ခဲနေရဦးမှာကလည်း ဘ၀ပေါ့
စက်လှေဝမ်းထဲ ရွဲ့ စောင်းစောင်းထီးလေးတစ်လက်ဟာ
လမ်းကိုသိစိတ်မဲ့ အခါခါဖြတ်ကူးနေတာ ကိုယ့်အချစ်ပါပဲ။
မင်းကသဘာဝတရားရဲ့  အရောင်တူပန်းပွင့်
ငှက်ကလေးလိုပျံသန်းနေမှာ. . .
ဒါ ကိုယ်တို့မေတ္တာ ကိုယ်တို့ကမ္ဘာ
စားလို့ပဲ ရူးခဲ့ရူးခဲ့။ ။